Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Ndidiniwe! Abaphambukeli bazifihla kwaye basela eThailand
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
IPattaya Pol. U-Col. Chitdecha Songhong, intsumpa yesikhululo samapolisa sase Nongprue, wakhokela iqela labanyanzelisi bomthetho kuhlaselo lwasebusuku kwi-pub yasebusuku kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngoJulayi 26, 2021.
Abantu abalishumi elinanye bamanye amazwe kunye nomThai omnye bafunyanwa kwigumbi elingaphantsi kwebala besela iziselo ezinxilisayo.
Wonke umntu wabanjwa watyholwa ngolwaphulo mthetho.
Okwangoku, iThailand iphantsi komyalelo wokuvalwa obandakanya izithintelo ngokuchasene nemibutho yoluntu kunye nokuthengisa okanye ukusela utywala.
Into abayifumeneyo yayikukuhlanganisana kwabemi bamanye amazwe abali-11 kunye nomntu omnye waseThailand esela iziselo ezinxilisayo kwigumbi elinevenkile. Babanjiwe kwaye batyholwa ngokwaphula uMmiselo oNgxamisekileyo kunye nokungathobeli imiyalelo yeSebe laseChonburi loLawulo lwezifo kuthintelo kwiindibano zoluntu kunye nokuthengisa okanye ukusela utywala.
Amapolisa asePattaya axelelwa ngabemi baseSoi Wat Boon Samphan ukuba indawo ethile yentselo ibambe amaqela okusela rhoqo kuloo ndawo, abaziyo ukuba ayayichasa imiyalelo yokutshixwa liSebe loLawulo lwezifo eChonburi.
Kwezinye iindaba zebar, ividiyo ekwavela nayo kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo, ibonisa uPattaya owaziwayo "I-Coconut Bar" efudukele eSoo Buakhao. Ividiyo ibonisa abesetyhini abanxibe ngocoselelo kunye nabadala basePattaya behleli ndawonye ngaphandle kwemaski njengoko babesela. Umqhubi wesithuthuthu kule ndawo uqinisekisile ukuba abasetyhini abarhanelwa ngokuba ngoonongogo bakhona busuku ngabunye.